सिण्डिकेटको अन्त्य र आशङ्का | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय सिण्डिकेटको अन्त्य र आशङ्का
सम्पादकीय 74 views
सिण्डिकेटको अन्त्य र आशङ्का
नेपालमा यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेको सिण्डिकेट/कार्टेलिङ प्रणाली हटाइनुपर्‍यो भनेर आवाज उठेको २०औं वर्ष भयो । लोकतन्त्र आएसँगै उठेको यो आवाजले बल्ल अब सार्थकता पाउने छाँट देखिएको छ । व्यवसायीहरूको चर्को विरोधका बीच यातायात व्यवस्था विभागले आइतवार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४’ जारी गरेसँगै यो आशा पलाएको हो । सिण्डिकेट प्रणाली हटाउन २/३ वर्षअगाडि नै अदालतले आदेश जारी गरेको हो । अदालतको त्यस्तो आदेश आएसँगै त्यही बेलादेखि नै सिण्डिकेट हट्नुपर्ने हो । तर, कसैले पनि हटाउन सकेको थिएन । यसपटक पनि यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने शङ्का कायमै छ । विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै ‘अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रूट इजाजत लिन पाउने’ भन्ने घोषणा गरेपछि भने यातायातमा रहेको सिण्डिकेट प्रणाली हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विभागको यो कदम प्रशंसनीय छ ।
सिण्डिकेटको विषयमा यहाँ सबैले आवाज उठाउने, हल्ला गर्ने, गुनासो गर्ने गरेको सार्वजनिक यातायात र सामान ओसार्ने ट्रककै विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइएको छ । सिण्डिकेट/कार्टेलजस्ता क्रियाकलाप यो क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा घोषित तथा अघोषित दुवै रूपमा चलिनै रहेका छन् । कतिपय सिण्डिकेट/कार्टेलिङ अमुक सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित छन् भने कतिपय क्षेत्रमा अघोषित रूपमा व्यवसायीहरूले आपसी अनौपचारिक मिलेमतोबाट पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा चलेका सिण्डिकेट/कार्टेलले गरेको निर्णयलाई बजार नियमन अनुशासनको नाममा वैधता दिने पनि गरिएको छ । यसो हुन दिइनु हुँदैन । बजार नियमन गर्ने छुट्टै स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ । जस्तो, धितोपत्रको नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), दूरसञ्चारको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बीमाक्षेत्रको बीमा समिति, औषधि क्षेत्रको औषधि व्यवस्था विभाग रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात र सामान ओसारपसार गर्ने ट्रक सेवालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता खालका स्वतन्त्र नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ । यसो नभएसम्म सेवाग्राही तथा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा सही समयमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन् । हाल जुनजुन क्षेत्रमा सिण्डिकेट/कार्टेल प्रणाली चलिरहेको छ, ती क्षेत्रमा तत्कालै यस्तो व्यवस्था ल्याइनुपर्छ ।
सिण्डिकेटको विषयमा यहाँ सबैले आवाज उठाउने, हल्ला गर्ने, गुनासो गर्ने गरेको सार्वजनिक यातायात र सामान ओसार्ने ट्रककै विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।
हालका लागि सरकारले दुईओटा कुरा लगत्तै गरिहाल्न आवश्यक देखिन्छ– पहिलो, सिण्डिकेट/कार्टेल पूर्णरूपमा हटाउने र दोस्रो स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको व्यवस्था । सार्वजनिक यातायातमा नयाँ प्रणाली आउँदा केही नयाँ समस्या उठ्न पनि सक्छन् । गाडीहरू समयमा चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने कुरा हो । अहिले आफ्नो सिण्डिकेटको अर्को गाडी बस स्टपमा आइपुग्दा त्यहाँ अगाडि नै आएर पर्खिरहेको गाडी अगाडि बढ्ने निश्चित छ । सिण्डिकेट हटेपछि त्यस्तै हुन्छ त ? कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर आयो भने कम्पनीका धेरैओटा गाडी हुने हुनाले त्यो समस्या नरहला भन्ने आशाचाहिँ गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा एउटै कम्पनीको अर्को गाडी बस स्टेशनमा आइपुग्यो भने त अवश्य हि“ड्ला । जेहोस्, अहिले सिण्डिकेट/कार्टेल हटेपछि नियमनकारी निकायको स्थान खाली भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको यो कदमलाई सर्वसाधारणले प्रशंसा नै गरेका छन् । तत्कालका लागि प्रशंसा गरिए पनि त्यो खाली ठाउँ पूरा गरिएन भने केही समयपछि सोही सिण्डिकेट/कार्टेलको माग नहोला भन्न सकिन्न । विभागले यसको नियमन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिइसकेको छ । लाइसेन्स दिन सक्दैन, आफ्नो वेबसाइट चुस्तदुरुस्त राख्न सक्दैन भने यातायातको नियमन गर्ला भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिन्न । संसारका केही देशमा नगरभित्र चल्ने नगरबसको सोही नगरपालिकाले नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो प्रणालीमा जान पनि नेपालका नगरपालिकाहरू त्यस्तो गर्न सक्षम छैनन् । यस्तो विरोभासपूर्ण अवस्थामा साँच्चिकै सिण्डिकेट/कार्टेलको अन्त्य होला त ? शङ्का अझै छ ।